Shirkadaha Gates Foundation iyo TikTok oo lacag ugu deeqay Africa. - Awdinle Online
Shirkadaha Gates Foundation iyo TikTok oo lacag ugu deeqay Africa.
April 29, 2020 (Awdinle Online) –Shirkadda dhinaca warbaahinta bulshada ee TikTok iyo hay’adda Gates Foundation ayaa shaaca ka qaaday in midkiiba uu bixin doono 10 milyan oo dollar si wax loogu qabto dhibaatada Coronavirus ee Afrika.
Dhinacyadan ayaa maanta sheegay in qarashaadkaasi ay ku caawin doonaan shirkadda GAVI ee ka shaqeysa dhinaca tallaalka, si ay uga caawiyaan Afrika in tallaalka COVID-19 uu gaaro sida ugu haboon.
GAVI ayaa sheegtay in qarashaadkaasi ay u isticmaali doonaan sidii tallaalka loo gaarsiin lahaa Afrika, marka la xaqiijiyo in uu wax ka qabanayo COVID-19 islamarkaana la sharciyeeyo talaalka Coronavirus oo aduunku dadaal ugu jiro sidii loo soo saari lahaa.
Dalal badan iyo shirkadaha dawooyinka soo saara ayaa dadaall xooggan ugu jira sidii loo heli lahaa talaalka cudurka Coronavirus, ayada oo ay socdaan tijaabooyin dhowr ah.
Qaarada Afrika ayaa la aaminsanyahay in ay adkaandoonto si looga talaalo xanuunka maadaama dadkaasi aysan lahayn awood dhaqaalo oo ay ka xakameeyaan cudurada Faafa si taas la mid ah u heli karaan daawooyinka Xanuunka Afaafada ah.
Wadamada Afrika waxaa horay qalab caafimaad ugu deeqay hay’ada Jack Ma Fundition oo uu leeyahay Maalqabeenka u dhashay Shiinaha ee aas aasay Shirkada Alibaba group,waxaana qalabkaasi loo qaybiyay 54-ta Dowladood ee qaarada Afrika.
Guud ahaan Qaaradda Afrika ayaa laga soo sheegay 33,566 kiis iyo 1,469 dhimasho ah illaa iyo hadda, sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday Xarunta Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada Afrika (Afrika CDC), halka 10,152 ay ka soo bogsadeen cudurka Qaarada Afrika.
Previous articleHay’adda Xuquuqul Insaanka oo go’aan kasoo saartay qirashadii Mareykanka ee duqeyn ka dhacday Soomaaliya
Next articleMadaxweynaha Koonfur Galbeed Oo Ka Hadlay Fatahaadii Khardho & Baardheere